Korda (vahoaka) - Wikipedia
Ny Korda dia vahoaka miteny indô-eorôpeana, isan' ny vahoaka iraniana, izay ny ankabeazany Miozolmàna sonita izay miisa eo anelanelan' ny 30 000 000 sy 40 000 000, monina indrindraindrindra ao Torkia sy ao Iràna sy ao Iràka ary ao Siria.
Hatramin' ny taonjato iray izay dia nisy Korda sasany izay nitolona ho amin' ny fizakan-tena mba hahafahan' izy ireo manana ny tanindrazany manokana, dia i Kordistàna. Ny firenena rehetra izay ahitana fianakaviambe korda dia manohitra fatratra ny fiforonan' ny fanjakana korda sady manahy ny hahalasanan' ny ampahan' ny tanim-pireneny. Nisy ny fifindra-monina vao tsy ela izay niteraka ny zanaka am-pielezana (diaspôra) korda miely amin' ny firenena rehetra any Eorôpa Andrefana sy any Etazonia ary any Aostralia. Ilay fianakaviambe tao Kabul dia nandao an' i Afganistàna tamin'ny ady mangotraka niseho tamin' ny faramparan' ireo taona 1970.
Miteny amin' ny fitenim-paritra maro mitovitovy ny Korda, dia fiteny avy amin' ny fiteny korda ihany, izay isan' ny fiteny iraniana. Ny fiteny korda dia mampiasa abidy avy amin' ny abidy arabo sy abidy latina, sy karazan' ireo maro hafa koa. Ny Korda ao Kordistàna Atsimo sy Atsinana dia miteny sôrany (sorani), ny ao amin' ny tapany efatra hafa dia miteny kormanjy (kurmandji), ny ao Kordistàna Avaratra miteny zazaky. Misy fitenim-paritra hafa koa izay tenenina ao amin' ireo faritra maro ao Kordistàna toy ny fiteny lôry, ny fiteny laky, ny fiteny gôrany, sns.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Korda_(vahoaka)&oldid=999115"
Dernière modification le 19 Desambra 2020, à 12:34
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2020 amin'ny 12:34 ity pejy ity.